Somalia: ​Gollaha Amaanka oo muddo-kordhin AMISOM [AKHRI]
NEW YORK, USA - Gollaha Amniga ee QM, ayaa mudo kordhin u sameeyay Ciidamada Midowga Africa ee AMISOM, oo 10 sano dalka kawada howlgal ka dhan ah Al Shabaab, kaasi oo weli guul laga gaarin.
Dowladaha Gollaha Amnga, oo ka kooban 15 dal, ayaa u codeyay qaraarka mudo kordhin AMISOM oo tirsigiisu yahay (21,626), kaasi oo ay isku raaceen in AMISOM sii joogto Somalia mudo 9 bilood oo dheeraad ah, ilaa laga gaarayo 31 May 2018.
Warbixin uu soo saarey Golluhu, ayaa lagu sheegay in wixii ka horeeyay 31 May 2018, si tar-tiib ah, loo saarayo Ciidamada AMISOM, iyadoo markiina Mas'uuliyadda amaanka lagu wareejinayo Ciidamada Xoogga dalka Somalia.
Tirada Askarta AMISOM ayaa la filayaa in la dhimo marka la gaaro 30 October 2018, xilligaasi oo laga dhigayo 20,626 (Labaatan Kun, Lix Boqol iyo Lix iyo Labaatan Kun), halka hadda ay ka yihiin 22,126 (Labo iyo Labaatan Kun, boqol iyo Labaatan iyo Lix Askari).
Qaraarkan ayaa dhigaya in AMISOM ay sii wado howlgalka iyo Tababarka Ciidamada Qaranka Somalia, illaa laga gaarayo waqtiga bixitaankooda, si aysan u dhicin marnaasho dhanka amaanka ah, oo Al shabaab loo siin fursad ay kusoo laabato.
Askar Boolis ah oo gaaraya 1,040 (Kun iyo Afartan Askari), ayaa baaqi kusii ahaan doono dalka, kuwaasi oo la talin iyo tababaro siin doono Booliska Somalia, sidoo kalena ilaalin doono Xafiiska kaalmeynta QM ee Somalia (UNSOM).
Ciidamada AMISOM ee ku sugan Somalia waxay ka kala socdaan Kenya, Burundi, Uganda, Ethiopia iyo Djibouti, kuwaasi oo ka howlgala gobollada Koonfurta iyo bartamaha wadanka Somalia.
Uganda oo Ciidamo ka duwan kuwii hore usoo diraysa Soomaaliya
Soomaliya 09.11.2017. 22:24
Uganda ayaa shaacisay in Ciidamo ka duwan kuwii hore ay usoo diraysa Soomaaliya...